वनको जग्गा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई, अस्पतालको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालसँग जोडिएको सेक्टर वन कार्यालय, बुटवल...
गर्मीमा के खानुपर्छ र के खानु हुँदैन भन्ने विषयका बारेमा जान्नु आवश्यक हुन्छ । यहाँ हामीहरू त्यस्ता खानेकुराको चर्चा गर्दैछौं जसलाई गर्मीमा नखाएकै राम्रो ।&nbs...
व्यस्त जीवनशैली, गलत खानपिन र तनावका कारण पेट खराब हुन थाल्छ । यसको खराब असर हाम्रो पाचनप्रणालीमा पर्छ । यो समस्याबाट मुक्तिका लागि घरेलु उपाय नै भेटिन्छ...
धेरै नेपालीको दैनिकी चियाबाट सुरु हुन्छ । चिया नेपाली संस्कृति नै बनिसकेको छ । चिया तयार नपार्ने घर सायदै हुन्छ । कतिपयलाई त कैयौँ कप चिया पिउँदासमेत धित मर्दैन । जुन स्वस्थकर छैन । खाली पेट चिया पिउनाले ...
फलफूल हाम्रो शरीरका लागि पौष्टिक तत्त्वका गजब स्रोत हुन् । हामीले नियमित फलफूल खाने गर्नुपर्छ । फलफूल जतिखेर खाएपनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र कुसमयमा खाँदा स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन । फलफूल खाने सही समय हामी ब...
पुरुषले दिनदिनै बिहान खाली पेट लसूनको एक पोटी खाँदा विभिन्न रोगको उपचारमा सहायता पुग्छ । लसूनमा एलिसिन जस्ता पोषक तत्त्वहरू हुन्छन् । यिनले स्वास्थ्यसम्बन्ध...
यी लक्षणलाई नगर्नुस् बेवास्ता, हुन सक्छ मिर्गौलाको पत्थरी
पत्थरीको समस्या आजकल धेरैजनालाई हुने गर्छ । मिर्गौलामा पत्थरी भएपछि असहनीय पीडा हुन्छ । गलत खानपिन र कम पानी पिउने बानीले पत्थरी हुन्छ । पत्थरी हुनुअघि श...
केतपाईँ प्याजको बोक्रा फालेर तरकारी वा अचारमा प्रयोग गर्दै गर्नुहुन्छ ? तपाईँले गलत गर्नुभयो । किनकी प्याजको बोक्रा फाल्नु भनेको धेरै कुरा फाल्नु हो । क...
काश नेपालमै कोभिड- १९ को भ्याक्सिन बनेको खबर सत्य हुन्थ्यो !
डा. प्रकाश खरेल
केही दिनदेखि नेपाली प्राध्यापकले कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लगाएको कुरा छ्याप्छ्याप्ती छ । यसका पक्ष/विपक्षमा अनगिन्ति समाचार र सामाजिक सञ्जालमा मन्थन जारी छ । ...
दिनदिनै स्याउ खाए यस्तो हुन्छ फाइदा !
दिनको एउटा स्याउ खाँदा डाक्टरकहाँ धाउनुपर्दैन भन्ने पुरानो आहान नै छ । वास्तवमा स्याउ एकदमै स्वस्थकर खानेकुरा हो । स्याउमा एन्टीअक्सिडेन्ट, फाइबर र फ्ल...
मुटु शरीरको यस्तो अंग हो जसलाई स्वस्थ राख्न नसक्दा मानीसले कतिबेला आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनपुग्छ थाहा नै हुँदैन । बाहिर स्फूर्त देखिने व्यक्ति पनि मुटु अस्वस्थय ...
खुकुलो लकडाउन र कोरोना संक्रमणबाट बच्ने २० उपाय : डा. रवीन्द्र पाण्डे
लकडाउन केही खुकुलो भएको छ। कोरोना संक्रमण अनिश्चित कालसम्म रहनसक्ने तथा हाम्रा आधारभूत आवश्यकता आजको आजै अनिवार्य भएकोले लकडाउन खुकुलो गर्नुको विकल्प छैन। ...
स्वस्थ्य खाद्यान्न र सन्तुलित आहारले बढाउँछ कोभिड– १९ विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता
कोभिड– १९ बाट सिर्जित जोखिमका बीच आइतबार विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस ‘खाद्य पदार्थमा स्वच्छता :हामी सबैको प्रतिबद्धता’ मूल नाराका साथ मनाइँदैछ...
- कोरोना संक्रमण तरकारी, फलफूल लगायत अन्य खाद्यान्नबाट सर्दैन। - संक्रमितसँग ५-१० मिनेट कुरा गर्दा सर्दैन। - घरबाहिर जाँदा सबैले अनिबार्य रुपमा मास्क ल...
बच्चालाई कामज्वरो आउँदा विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । -बच्चालाई दायाँ वा बायाँ कोल्टे फर्काएर राख्ने । -जतिसक्दो चाँडो नजिकैको अस्पताल लैजाने ।&nb...
मुसा, झिँगा, उडुस भगाउने घरयासी उपाय, एकपटक प्रयोग गरेर हेर्नुस् कतिपय घरमा मुसा, झिंगा, उडुस आदिले हैरान कटाएका हुन्छन् । दिनहुँ देखिने यी समस्याबाट ...
किशोरी बलात्कारको आरोपमा वडाध्यक्ष शाही पक्राउ
नेपालीको उद्धारका लागि १ हप्ता चार्टर्ड उडान
बर्सेनि पहिरोकै पिरलो, वर्षाले झनै बढायो जोखिम